Ny tratran'ny meniscus ny lohalika, manimba ny tandrok'olona meniscus, meniscus anatiny - ny soritr'aretina, ny diplaoma, ny fitsaboana
Herisetra ataon'ny lehilahy - fitsaboana sy fanarenana
Ny fanimbana meniscus dia ny fahavoazana iombonana amin'ny ankapobeny. Ny olana dia matetika atrehan'ny atleta sy ny mpiasa miasa mafy. Amin'ny fahitana voalohany ny fandikana ny fiasan'ny lohalika dia tokony hifantina dokotera ianao. Hanampy amin'ny fotoana hanombohana ny fitsaboana izany ary hisoroka ny vokany.
Ny endriky ny meniscus jenny
Raha ny tena izy, dia fitiliana fototarazo. Ny fototry ny meniscus dia 70% ny vatana collagen. Ankoatra izany, manodidina ny 0,6% elastin ary 13% proteinina manokana no eto. Ny fonosana kely dia misy sokajy toy izany:
ny tandroka aoriana.
Noho ny hoe ny cartilage dia mifandray amin'ny kapsule miaraka amin'ny ligaments tibial sy femoral, manome izany ho an'ny fahaleovan-tena sy ny tanjaka ambony. Misy karazana meniscus toy izany:
fonosana anatiny na medaly;
External (antsoina koa hoe "meniscus lateral").
Ny vatan'ny kodiarana toy izany dia tena zava-dehibe ho an'ny rafi-pitiliana. Ny asany dia ireto manaraka ireto:
dia ny toeram-piofanana sy ny fitrandrahana ny fifindran'ny lohalika;
mampihena ny fifandonana eo amin'ny foza sy ny tibia;
dia mitana ny anjara asan'ny fanamoriana tampoka.
Ireo karazana fahavoazana amin'ny meniscus amin'ny lohalika
Ny ratra rehetra dia azo sokajiana araka ny toetra roa: ny halatra sy ny karazan-tsokosoko. Ny famantatra ny dingana amin'ny fahasimbana dia hanampy ny MRI. Ankoatr'izany, ny ratra amin'ny lohalika, ny ranomandry meniscus dia mety amin'ity karazana ity:
Trauma ny meniscus lateral
Ny antony voalohany amin'io fiparitahana io dia ny ratra tafiditra miaraka amin'ny fihodinan'ny shin. Tsy hita vahana ny fanimbana mivantana an'ity fanenomana ity. Ankoatra izany, ny meniscus lateralin'ny lohalika dia mety ho simba noho ny fiantraikan'ny aretina rheomy. Na izany aza, ny fahavoazana amin'ny fananganana karatry ny kitrilezina dia miteraka fito na in-10 isaingana kokoa noho ny ao anatiny.
Ny tratran'ny meniscus iraisana medial
Ny antony mahatonga ny fitomboan'ny fananganana ity karazam-borona ity dia betsaka:
fiovana mafy eo amin'ny toeran'ny vatana;
Mihoatra ny lanjany, izay miteraka enta-mavesatra mafy eo amin'ny rafitry ny muscle;
ny fihodinana tsy nahomby sy ny sisa.
Ny meniscus medaly dia matetika no saro-tahotra amin'ny lehilahy noho ny amin'ny vehivavy. Any amin'ny faritra tena atahorana ny atleta dia atleta:
mpilalao baolina kitra.
Ny fahavoazan'ny meniscus manjopiana - ny soritr'aretina
Ny fiparitahan'ny fananganana cartilaginous dia manomboka amin'ny dingana areti-maso sy lava. Ny fahavoazana amin'ny meniscus amin'ny soritr'aretin'ny lohalika dia afaka manana ireto:
tsindry iray vokatry ny fanafoanana ny fibra fonosana;
Raha misy ampahany amin'ny meniscus dia mifandona eo amin'ny tendrony roa, dia mety hitarika amin'ny fanakanana ny lohalika izany;
fanaintainana, ny fahasamihafany dia miova arakaraka ny dingana nateraky ny ratra;
Ny kôdônin'ny lohalika, izay midika fa ny meniscus sy ny ligramana dia tapaka tampoka;
Rehefa misy fiantraikany eo amin'ny sisim-pandrefesan'ny kanseran'ny nono, dia mitombo ny hemarthrôs .
Mba hahazoana antoka fa maratra ny meniscus dia hanampy izany:
Symptom Baikov - tokony halefaka amin'ny lohaliny ny lohalika. Taorian'ny fisalasalan'ny sehatra iraisana. Mandritra izany fotoana izany, ny lohalika dia tsy misaina. Raha misy fanaintainana be dia be - dia midika fa ny fisarahana amin'ny meniscus.
Landau symptom - tokony hipetraka amin'ny marary ny tongotra. Raha misy fanaintainana mafy eo amin'ny lohalika - marika izany fa maratra ny meniscus.
Symptom McMurray - mila mandry eo amin'ny lamosiny ny marary ary mandohalika ny lohalika. Aorian'izany dia misy hetsika rotaka atao. Ny olana sy ny fanaintainana toy izany dia miresaka momba ny fandikana.
Ny Symptom Polyakova - mila mandainga ianao ary manangana ny tongotrao. Ilaina ihany koa ny ilaina, miankina amin'ny lamosin'ny akorany sy ny tongotry ny tongony faharoa, kely amin'ny fananganana ny andalana. Aorian'izany fanazaran-tena izany eo amin'ny sehatry ny fifehezana ny fananganana kardilagine, dia hisy fanaintainana mafy.
Dingana manimba ny meniscus
Misy dingana maromaro ny fanitsakitsahana. Misy vondron'olona telo, rehefa misy ratra meniscus - ny soritr'aretina dia:
ny dingana voalohany - ny endriky ny fanitsakitsahana kely;
faharoa faharoa - mitombo ny fifantohana amin'ny fahasimbana;
Ny dingana fahatelo - misy alahelo.
Fiatrehana ny menokus manjavona - fitsaboana
Amin'ny fampiasana fitsapam-pahaizana ara-pahasalamana, manam-pahaizana momba ny traumatologist iray ihany no afaka mametraka diagnosy. Mba hahafantarana ny toetry ny lesion sy ny fahasarotany, ny dokotera dia hanome toro-marika fanampiny amin'ny marary. Ny fantsom-panafody tsotra dia tsy dia mampahafantatra loatra momba ity tranga ity, satria tsy mampiseho ny fananganana ny cartilaginous. Ny fahavoazana amin'ny tandrok'olona meniscus na aretina hafa dia afaka manampy amin'ny fomba famahana ny aretina toy izao:
Raha mifototra amin'ny vokatra azo, ny mpitsabo trauma dia hifidy ny fomba fitsaboana tsara indrindra. Ny fitsaboana tsy misy fitsaboana dia matetika ampiharina raha:
ny knee dia tsy voasakana;
Ny tsy fahampian'ny meniscus medaily dia tsy manan-danja;
Tsy misy kitika rehefa mitondra fiara;
Nipoitra tampoka ny marary efa zokiolona.
Ny fototry ny fitsaboana nentin-drazana dia ny hanafoanana ny fanakanana ny lohalika. Ny fitsaboana toy izany dia asehon'ireto dingana manaraka ireto:
Atongilano ny votoatin'ilay kitapo iombonana.
Ampidiro 10 ml 1% Procan solution na 20 ml 1% vahaolana amin'ny Novocain.
Ny marary dia tokony hipetraka amin'ny seza avo lenta mba hahatonga ny elanelana eo amin'ny shank sy ny feny mahitsy.
15 minitra aorian'ny fikarakarana ny zava-mahadomelina, ny dokotera dia mivantana mivantana amin'ny fanodinana.
Raha rava ny meniscus anatiny dia alefa amin'ny dingana efatra ny sakana:
Ny traumatologist dia mitarika ny tongotra. Ity fepetra ity dia azo tanterahana amin'ny tànana na amin'ny fanampian'ny tavy manify izay mandrakotra ny tongotra.
Ny dokotera dia manilika ny shin amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny meniscus voatandrina. Mandritra izany fanodikodinana izany, mitombo ny habaka iombonana. Vokatr'izany, ny meniscus dia mety ho tonga amin'ny toerana voalohany.
Ny dokotera dia manao fihetsika mihodina amin'ny shin, manodina azy any ivelany na ao anatiny.
Ny hafanana malalaka sy ny fanitarana ny tongolobe dia tanterahana.
Matetika matetika no ahemotra ny fanakanana ny fanakanana izany. Amin'io tranga io, ny dokotera dia mampihantona lavaka fananganana gypsum, manomboka amin'ny rantsantanana mankany amin'ny ampahatelon'ny ampongabendanitra. Arovy ny marary amin'ity herinandro ity 5-6 herinandro. Raha tsy afaka manala ny sakana ianao, aorian'ny fanodinana voalohany dia tokony averimberina izany. Ny isa avo indrindra dia telo heny. Izy rehetra dia tokony hikarakara dokotera trauma iray efa za-draharaha.
Aorian'io, dia manome fitsaboana amin'ny marary ny marary. Fantany izay tokony hataony amin'ny ratra amam-behivavy, ka izy no hanolotra ny fomba fiasa mahomby indrindra. Matetika ny fitsaboana dia ahitana ireto fanodikodinana manaraka ireto:
fitsaboana ultra-high frequency;
Nahomby ireo mpitsabo mpikaroka. Ireo zava-mahadomelina dia mamerina ny fibra fonosana. Ny fanafody toy izany dia afaka milaza hoe:
Fatorana amin'ny lohalika misy ratra meniscus
Ity lohalika ity dia vita amin'ny elastika. Manana tononkalo malemy izy, noho izany dia azonao anaovan-dabozia eo ambany akanjonao. Koa satria tsy misy tebiteby ny lohalika dia tsy mivaona izany. Ny arofanina dia samy hafa arakaraky ny tsindry mafy atao amin'ny tongotra:
Ny lohalika eo amin'ny kilasy famongorana voalohany dia ampiasaina rehefa hita fa voan'ny aretim-pivalanana ny lohalika. Ny tsindry azo ampiharina amin'izy ireo dia 22 mm Hg. Ny fandevenana toy izany dia manakana ny famongorana ny meniscus.
Ny knee pads 2 kilao amin'ny famadihana - voatendry mandritra ny fe-potoam-piasana. Mandrisika ny fiasan'ny rafi-pandrefesana sy ny rafi-pandaminana izy ireo, manatsara ny fizotran'ny fanarenana.
Herisetra ara-tsaina - fampiharana
Ny fidirana amin'ny serivisy dia asaina amin'ny tranga toy izany:
nisy ny fanimbana ny fiaraha-miasa ary ny fanitsakitsahana toy izany dia miaraka amin'ny fandosirana;
nisy ny fifehezana meniscus manontolo voamarina;
ny vatan'ny cartilaginous dia nopotehina;
nisy ny fanavaka ny tandroka;
Ny fitsaboana nentim-paharazana dia tsy nanome ny vokatra iriany.
Esory ny fahasimbana amin'ny meniscus anatiny amin'ny lohalika miaraka amin'ny fanampian'ireo teknolojia toy izany:
arthroscopy - singaingaina;
meniskectomy - fanesorana ny fizotran'ny karazam-borona;
Famindrana - fanoloana vatana maty.
Herisetra ara-tsaina - fanarenana
Ny fanarenana amin'ny fotoam-pitsapana taorian'izay dia aseho amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana ara-batana. Ny faharetany dia miankina amin'ny inona ny faharatran'ny meniscus ary inona no ampiasaina amin'ny teknolojia mba hanafoanana izany. Ny tanjon'ity famerenana amin'ny laoniny ity:
Esory ny fifampiraharahana nitranga taorian'ny nandravan'ny meniscus lohalika.
Atsaharo ny fiaraha-miombon'antoka ary hajao ny lalana.
Hamafiso ny hozatra izay mampiady ny lohalika.
LFK miaraka amina lozam-pifamoivoizana
Misy ny fanatanterahana fitsaboana iray manontolo. Izy ireo dia tsy maintsy tanterahana eo ambany fitarihan'ny manam-pahaizana matihanina. Fantany ny zava-manahirana amin'ny trauma na fisarahana ao amin'ny meniscus. Ankoatr'izay, fantany ny entana azo atao na amin'io dingana io. Noho izany, fampihetseham-panafody amin'ny traumé de meniscus fitohanan'ny lohataona mandritra ny vanim-potoanan'ny postoperative dia aseho amin'ny fampiharana ny fampivoarana ankapobeny, izay mikendry ny vondrona rehetra. Amin'ny faramparan'ny taom-piasana, ny fitsaboana amin'ny fampiharana dia asehon'io ariary manaraka io:
mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'ny rindrina (mihazakazaka ao anaty paika);
fampiharana ao amin'ny baolina fanaovana fanatanjahan-tena;
mitsambikina tongotra iray;
asa eo amin'ny bisikileta mipetraka;
"Filalaon'ny tongotra" sy ny sisa.
Fametahana ny lohalika taorian'ny fifanjevoana meniscus
Ity fomba fitsaboana ity dia ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitsaboana. Raha hita fa voan'ny aretim-pivalanana ny ankizilahy, dia manampy amin'ny fanatontosana izany ny fitsaboana amin'ny fanasitranana:
fampihenana ny fiasan'ny tavy;
famerenana ny feon'ny muscle;
fampihenana ny fahatsapana fanaintainana;
fanatsarana ny fitiliana ny ra ao amin'ny tavy.
Ao amin'ny dingana voalohany dia ny fanasitranana sy ny fametahana mangatsiaka no mampiseho ny masage. Ity dingana ity dia maharitra tsy mihoatra ny 3 minitra. Taty aoriana dia misy fifandraisana mahery vaika kokoa mifandraika, ohatra, ny fametahana boribory sy mivantana. Ny fampiasana toy izany dia atao mandritra ny 4-5 minitra. Fenoy ny fanasambe miaraka amin'ny fihetsika mihetsiketsika sy matevina. Amin'izany fotoana izany, afaka ampiasaina ny elektrostimulasyon ny valizy.
Ny fahavoazan'ny meniscus mitambatra - ny vokany
Raha fantatrao ny olana amin'ny fotoana sy manomboka manitsy azy amin'ny fotoana, dia afaka misoroka zava-tsarotra lehibe ianao. Ny trauma tranainy amin'ny meniscus lohalika dia fanenjehana. Mety hitarika ho amin'ny vokany toy izany:
Manandrana ny fampandrosoana ny arthrôsis .
Mba hamoronana fikorontanan'ny toetr'andron'ny mekanika. Amin'ny fotoana rehetra mandritra ny hetsika dia mety hitranga ny sakana.
Mitarika ho tapaka ny taolam-paty ary mety ho tapaka ny taolana.
Raha voan'ny aretin-tsofina amin'ny ankapobeny ny meniscus amin'ny fotoana, dia hiverina ao anatin'ny fotoana fohy ilay marary. Eny, ary matetika ny fidirana amin'ny fitsaboana dia tsy misy fahasarotana. Na izany aza, amin'ny marary rehetra mandritra ny faha-40 taonany, mitombo ny voka-dratsin'ny fanatsarana ny vokadratsiny. Izany dia noho ny fahalemen'ny herinaratra amin'izao fotoana izao. Ny traumatologista za-draharaha iray dia hanampy anao hiatrika io olana io.
Manimba ve ny pnemonia?
Ny dipoavatra nasalika
Ny misaona ny mainty hoditra
Ny rhinitis Constant sy ny orona eo amin'ny olon-dehibe
Tsiranoka amin'ny orona
Ny labozia avy amin'ny hemorrhoids amin'ny kisoa amoron-dranomasina
Ny herisetra ao amin'ny vavony - ny antony
Tavoahangy ho an'ny efitra fandroana
Hazo hemoglobinina miorina - ny antony
Fashionable jacket 2015
Vavaka ho an'ny olona
Ahoana ny fomba fitafy amin'ny fampisehoana?
Inona no tokony hanamboarana tongolo lay rehefa maniry ny ririnina?
Tiffany Trump indray eo amin'ny lantihy
Cacti - fikarakarana
Voazava ny basenan'ny ranomasina ao anaty lafaoro
Mango - fanangonana vaovao 2016